Zvose pamusoro peDhydroboldenone
1.Chii Dihydroboldenone / DHB? 2. Dihydroboldenone / DHB muyero
3.Dihydroboldenone / DHB purogiramu 4.Dihydroboldenone / DHB migumisiro
5.Dihydroboldenone / DHB migumisiro 6.Dihydroboldenone / DHB hafu yeupenyu
7.Dihydroboldenone / DHB yekucheka 8.Dihydroboldenone / DHB yekurwisa
9.Dihydroboldenone / DHB inobatsira 10.Dihydroboldenone / DHB inoongorora
11.Dihydroboldenone / DHB inotengeswa 12.Dihydroboldenone / 1-Testosterone yekuvaka muviri
1. Chii chinonzi Dihydroboldenone / DHB?
Dihydroboldenone (65-06-5) inowanzotaurwa nezvayo DHB iine steroid yakasimba inopa zvibereko zvakanaka kunyanya kune vashandi vemapurisa, mumhanyi, uye mabhasikoro. Vanhu vazhinji vanovhiringidza DHB neMethyl 1-kuedza nekuda kwezita rayo risina zita 1-testosterone. Zvisinei, iyo mishonga miviri yakasiyana, uye iyo yose inounza mhinduro dzakasiyana nemigumisiro zvakare. Chirwere ichi chinozivikanwa kuva pakati pe-steroid yakasimba zvikuru inopa zvibereko zvakanaka kuvashandisi vayo vose. Dihydroboldenone i5-alpha yakaderedzwa Boldenone iyo ndiyo chikonzero chezita racho. Zvinhu Zvose Zvaunoda Kuti Uzive nezvaAnavar (Oxandrolone) yeMuvhuro
Mukuenzanisa ne testosterone, DHB inowedzera kaviri anabolic uye less androgenic. Zvisinei, mishonga yakasimba yemishonga iyi haigone kutongerwa nyore nokuti vatambi vakawanda vanosarudza kushandisa Primobolan. Dihydroboldenone inozivikanwa nekuwedzera musimba kukura, kuita kuti zvive zvakaoma nekuvandudza simba rose remuviri. DHB simba guru rinobata simba rinoita kuti steroid ipe mararamiro akavimbika uye akanaka kune zvishoma zvisingabatsiri. Iyo mishonga inoshanda zvakanakisisa muSGGB kutungamira pasina mimwe migumisiro yakaipa.
Kana kutorwa zvakakodzera steroid inokurudzira mishonga inogadzirwa mumuviri pamwe nekuichengeta zvakaoma uye zvakasimba. Nokuda kwekuvaka muviri, iwe unofanirwa kuenderera mberi nawo nebasa rakanaka rinobuda kunze kuti uwane mhinduro dzakawanda. DTH ihomoni inowanzoitika mumuviri wako mushure mokunge testosterone ishanduka. Kungofanana nedzimwe steroid iyo yaimbova mumutumbi wemuviri inoshandura ikaita DTH uye DHB, testosterone inoshandura mu estrogen uye DTH. Zvichienderana nehuwandu hwekushandiswa kwako, chiremba anofanira kukutungamirira mukugadzirisa dhiyo yakakodzera. Kuti igare yakachengeteka, kuongororwa kwezvokurapa kunofanira kuitwa mushure mokunge uye mushure mokuzadzisa rwendo rwekutanga. Mitumbi yevanhu inoita zvakasiyana nemishonga yakawanda kuitira kuti steroids, uye naizvozvo kutarisana kwechiremba pedyo kwakakosha kuti zvive nani.
Dihydroboldenone (65-06-5), semamwe steroids yakaita basa rinokosha pakubatsira vatambi kuti vaite zvinangwa zvavo nekupa simba uye hutano hwekukura kwemisumbu. Iyo mishonga ine minda yakaipa iyo inoita kuti ive yakakosha kune vakawanda vadzidzisi vezvemagetsi. Dihydroboldenone inonyanya anabolic zvinoreva kuti inokwanisa kupa miviri miviri yakaonda kune vashandi vayo. Iyo mishonga haina kuwedzera mvura yekuchengetedza mumisungo uye ine zero anromatizing madhara. Muchidimbu, kana uri kutsvaga steroid iyo ichakubatsira kuti uwane mishonga uye uvandudze kushanda kwako, saka DHB ndiyo yakanakisisa inowanikwa iwe.
Kuwanda kwevamwe vanoshushikana nevashandi veDihydroboldenone vane, marwadzo ekuvharwa kwemajeri kusingafaniri kukurambidza kubva kushandisa chigadzirwa pakuenzanisa nemigumisiro yaunopa. Chirwere ichi chinopa simba remuviri rinoita kuti vashandisi vashande kwemaawa akawanda uye vabudirire mhinduro dzinodiwa. Vatyairi vengarava vanowanawo simba rakakwana rokuita uye kukwikwidza pamakwikwi. Vamwe vashandisi vanonyunyutira marwadzo kusvika mumazuva e7 mushure mejojo. Zvisinei, chiremba wako anogona kukubatsira kuti udzivise dambudziko racho, asi kushandiswa kwemafuta akashandiswa sterilizer kunogonawo kubatsira. Kunze kweizvozvo, chirwere ichi chinoramba chichinyanya kudiwa nevatambi vakawanda vemauto. Kune rumwe rutivi, zvakakosha kutenga steroid kubva kune mutengesi akatendeka uye ane ruzivo anopa mishonga yepamusoro pamwe nekuburitsa panguva yakakodzera.
2. Dihydroboldenone / DHB muyero
Iyo yakakodzera DHB miyero yakabva ku300 kusvika ku400mg kwevhiki kune vashandisi vevarume. Mushonga wacho unogonawo kushandiswa nevatambi vechikadzi asi mumadhora mashoma. Kune vatambi vechikadzi, zvinonzwisisika kutanga nemavhesi maduku kuti tidzivise migumisiro yakaipa yakadai sa virilization. Nhamba yevatambi vechikadzi inofanira kuva pakati pe25 kusvika ku100mgs pavhiki. Zvisinei, kune vakadzi vane zero vanoziva nevanabolic steroid, muyero unogona kuderedzwa nachiremba, uye zvino kuwedzerwa mushure mokupedzisa kutanga. Izvozvo zvinoshandawo kuvanhu; Vatangi vekutanga vanofanirwa kuchengetedza dihydroboldenone dosages yakakwirira uye nguva dzose rongai chiremba musati mawedzera doses.
The Dihydroboldenone kutora nguva yakawanda kunobva pane ester yakanamatirwa kumunda, asi izvozvo hazvipindi mazamu. Iye zvino, cypionate ndiyo ester inowanzoshandiswa mukugadzirwa kwechirwere ichi. Nhengo yevarume yakazara ichiri kubva ku200mgs kusvika ku400mgs kwevhiki pasinei nokuti ester inobatanidzwa. Chiremba wako achazofanira kutungamira iwe kuti uone kuti unochengetedza mazinga anodiwa emigumisiro yakanaka. Kana inotorwa nemuromo, mishonga yacho inotorwa nguva dzose kupfuura iyo injodzi. Dihydroboldenone yakazara kwazvo mumuromo wayo uye ine hafu yehupenyu hupfupi.
Kune rumwe rutivi, mutero wemuromo hauna kuwanikwa nokuti hausi methylated uye inobatsira pakudzivirira kubva pakuputsika nechiropa. Paunosarudza fomu ye dihydroboldenone injodzi, 100-200mgs chete pavhiki ichakwanirira mhinduro dzakanaka. Yeuka, kuti injectable dosages inofanira kutarisirwa neyanzvirapa kana kana iwe unyanzvi mairi iwe unokwanisa kuzvivhara iwe pachako. Usazviisa pangozi kana iwe usina chokwadi pamusoro payo kuti urege kuwedzera mamwe matambudziko.
Dzimwe nguva, chiremba angamanikidzwa kuwedzera kana kuderedza dhigi mushure mokuongorora mamiriro ako ehutano. Vatambi vakawanda vanokanganisa kutenga mishonga zvakananga kubva pamusika uye vanoshandisa pasina kusanganisa chiremba. Mitumbi yevanhu yakasiyana uye nekuda kwekuti chigadzirwa chiri kushanda kune shamwari yako hazvirevi kuti zvichave zvakakwana kwauri. Vamwe vanhu vachada mizinga yakakura yekutanga apo mamwe maitiro akadzika kwazvo madheji achave akakwana. Nguva dzose inosanganisira chiremba wako, mudzidzisi, uye nutritionist nemigumisiro yakanaka. Dzimwe nguva madheji anotaurwa nemuiti anogonawo kukundikana kukushandira iwe kana kuita kuti zviremera zvikuvadze.
3. Dihydroboldenone / DHB purogiramu
Kazhinji, vashandisi vakawanda vanotanga maitiro avo neminzwi mushure mekunge vakaiisa neAIDS 400-500mgs yeDHB kwevhiki uye ester tesstersterone yakareba. Zvinokurudzirwa zvakare kusanganisira aromatase inhibitor mumutambo weDHB kuti uenzanise isrogen kubva kune testosterone. Uyezve, unogona kushandisa sangano rekubatsira sezvakaita N2Guard. Tsvaga chiremba wako kuti uwane mamwe mashoko uyewo kuti ugadzire zvakanakisisa maererano nezvido zvako kana zvaunoda. Mamwe maitiro anogona kunge akareba kupfuura mamwe, zvichienderana nehutano hunoshandiswa nemutambi wacho. Vashandi vechibato vakawanda vane nguva yakareba Dhihydroboldenone kupfuura yakatanga. Kucheka kwepakati uye kukwidzika kwechikwata kune zvakasiyana uye zvinowanikwawo nezvimiti zvakasiyana-siyana. Kana iwe ukazadzisa mhirizhonga uye ukakundikana kuwana mitsva inoda kana iwe unosangana nemigumisiro yakaipa, udza chiremba wako.
4. Dihydroboldenone / DHB zvinoguma
The DHB zvawanikwa kuti iwe uchawana hunoenderana nekushandisa kwaunoita mushonga uye kuti unoenda sei nawo nezvimwe zvinodikanwa zvakadai sekushanda nekudya. Kune avo vanoishandisa vanonakidzwa nemigumisiro yakanaka uye vanozadzisa zvavanoda. Dihydroboldenone haifaniri kuonekwa seimwe yevana anabolic steroid, asi inopa zvibereko zvakanaka kune vashandi vakawanda. Mushonga uyu unozivikanwa nekuita kuti vashandisi vave nehutanda hwakasimba uye hwakasimba. Chinangwa chemuviri wega muviri ndechekukura zvakasimba uye kuonda kwemisumbu inozovabvumira kuti vadzikwike. Dihydroboldenone is steroid inotsigira maitiro emashandisi emhando munguva shoma. Kufambidzana neyero nehutsigiro huripo huchava pfungwa huru yekuzadzisa zvidikanwi zvaunoda.
Iyo mishonga inowedzerawo simba rose remuviri iro richaita kuti vatambi vashande kwenguva yakareba uye nyore nyore kuwana mishonga. Icho chinangwa chepamusoro kune mutambi wose ndechekubudirira mubasa rake, uye ndizvo chaizvo izvo dihydroboldenone inopa. Kuwanda kwevatambi vakashandisa iyi mishonga vakapa mhinduro yakanaka uye vakarumbidza iyo kuvabatsira kuti vakunda mazita akasiyana pashure pokunge vabudirira kupedzisa dhigiriji. Muzviitiko zvakawanda, vatambi vanokundikana kukunda nekuda kwekushaya simba, asi iyo ndiyo dambudziko richagadziriswa nenguva yaunopedza DHB yako. Kana ukakundikana kuwana migumisiro mushure mekufamba kwako, taura nechiremba wako kuti uwedzere rubatsiro. Mimwe migumisiro inogoneka ndeye migumisiro yechirwere kana iwe ukadarika kana kupesana nemirairo yachiremba.
5. Dihydroboldenone / DHB migumisiro
1-Testosterone (65-06-5) inoyevedza steroid iyo yakashandurwa nguva nenguva kuti iwedzere mararamiro ayo uye kuderedza migumisiro yechirwere. Zvisinei, nemhaka yekuoma kwehutano hwemunhu, vazhinji vashandisi vanoona zvakasiyana nemigumisiro mushure mekushandisa steroid. Dzimwe nguva vashandi vanoona zvinokonzerwa nemigumisiro pakarepo ivo vanotanga kufamba kwavo uye naizvozvo, zvinokurudzirwa kuzivisa chiremba wako munguva. Chiremba anogona kuderedza kuyerwa uye kana ikasaishanda iye / iye anogonawo kumisa kupoteredza. Mune zvimwe zviitiko, vashandi vanoona zvikamu zveshure gare mushure mokupedzisa mhirizhonga. Heano zvimwe zvezvakawanda dihydroboldenone side effects;
Zvinokonzera marwadzo - vazhinji vashandisi vanonyunyutira marwadzo mukati mejinga nzvimbo iyo dzimwe nguva inogona kuenda kwevhiki. Chaizvoizvo, ichi ndechimwe chezvinetso zvinowanzovhiringidzika vakawanda varimi vanotarisana kana vachienda kune sjected injectable. Zvisinei, iwe unogona kushandura kumuromo wemutero, kunyange zvazvo usina kusimba zvakanyanya kuenzaniswa nejenjodzi. Tichifunga nezvemigumisiro inosayirwa yemigumisiro yaunofara, saka marwadzo haafaniri kukumisa kuti urege kuzadzisa zvinangwa zvako.
Kusuruvara kwevhudzi: dzimwe nguva kana kupfuura, steroid inogona kuchinja zvakakwana bvudzi rako kukura. Zvisinei, kuonana nachiremba wako munguva inogona kubatsira kudzora dambudziko racho. Dzimwe mimwe migumisiro inosanganisira, kuderedza mawere, kukonzera kukanganisa kuchiropa uye kuchinja mwoyo wako uye chiropa kushanda. Izvi zvinowanzoshamwaridzana kune avo vanodarika steroid kana kuti vanoshandisa pasina vasina kuongororwa kwechiremba. Dzimwe nguva mamiriro ezvinhu emuviri anogona kukura nekuoma kwemigumisiro.
Madzimai, steroid inogona kutungamirira kukurudzirwa kwevanhu hunhu hwakafanana nekukura kwemisimba nekudzika kwezwi pakati pevamwe. Nokudaro, vakadzi vanofanira kutora steroid iyi nekuchenjerera uye vakanamatira kumashandisi ekushandiswa kwechiremba kuti zvive nani. Izvo zvisingakanganisi ne steroid iyi ndeyokuti migumisiro haisi pakarepo, izvo zvinoreva kuti kudarika mazuva ano zvingave zvisingaratidze migumisiro, asi iwe unogona kuvaona munguva yemberi. Zvichida, ndicho chikonzero nei vashandisi vakawanda ve steroid vasinganzwisisi. Kana iwe wakanamatira kumashandisirwo ekushandiswa ipapo iwe uchange uri parutivi rwakachengeteka.
6. Dihydroboldenone / DHB hafu yeupenyu
DHB inonyanya kusungirirwa kune cypionate ester iyo inowedzera DHB hafu yeupenyu kune mazuva 8-10, uye ndicho chikonzero ichi chirwere chinoshandiswa mushure memazuva ose e4 kana 6. Chiremba wako achagadzira kuronga uye kuronga nguva yakanakisisa yeiyo zvichienderana neester yakabatanidzwa uye zvinogadziriswa. Mushure mekunge mazadza purogiramu yenyu, DHB inoramba ichishanda mumuviri wako kwemavhiki masere e5 isati yanyangarika zvachose kubva mumuviri wako. Uyewo nguva inotorwa kuti ibudise mumutumbi wemuviri inobvawo pane ester inowanikwa kuDHB. Saka, kana iwe uchizokwikwidza mumakwikwi asingabvumi kushandiswa kweSteroids, zvo udza chiremba wako, kupa mishonga yakanakisisa iyo inopera mukati mechinguva chiduku.
Mhemberero DHB yemuromo inowanikwa hafu yehupenyu hushoma uye haina simba kudarika iyo injodzi. Mushandi wekurohwa, naizvozvo, zvinoreva kuti iwe uchatora kakawanda sezuva nezuva kuitira iwe kuti uwane migumisiro yaunoda. Zvisinei, varimi vemuviri vanowanzoenda kune injectable dosage nokuti yakakosha uyewo mukana wekushayikwa muyero hausi muduku. Iwe unongoda kuvhara mushonga kamwechete pavhiki. Kana iwe usina kunakidzwa nemajojo, iwe unogona kutaura nachiremba wako kuti upe mutero wemuromo.
7. Dihydroboldenone / DHB yekucheka
DHB kugadzira mararamiro ekugadzirisa muviri kunobatsira kubvisa mafuta emuviri asina kufanira kana kuchengetwa kwemvura mumisungo pamwe nechinangwa chekuwana musimba wakaoma uye wakaonda. Ikoko chinangwa chenyu ndechekudurura mapaundi akawanda sezvaunogona uye kubudirira mumiviri yako aine simba kana muviri wakagadzirwa. DHB yakabatsira vatambi vakawanda mumitambo yavo yekucheka, uye ichi chikonzero nei iri steroid yakakurumbira pakati pevatambi vechiremera. Kana yakanyatsorongedzwa zvakanaka inopisa mafuta akawandisa muviri uye pakupedzisira inoratidzira muviri wose. Kucheka kunobatsira pakuita kuti vashandi vemuviri vabudirire kumira kwemuviri uye musimba hwakasimba. Tsvaga chiremba wako, kuti akupe zvakanakisisa uye zvinobudirira DHB kuderedza mhepo.
8. Dihydroboldenone / DHB yekubvisa
Iko iwe uri kutarisira kuwana hutundu hwakawanda uye uremu. DHB ine zvinhu zvinoshamisa izvo zvinoita kuti zvive zvakanaka kune vavatambi vakawanda saka vanovaka muviri. Dhihydroboldenone bulking cycle inosanganisira kutora madhigirii evhiki imwechete yakafanana ne400 kusvika 500mgs uye kudya kwakakodzera. Itero steroid ine unhu hwakanaka kwazvo mukubatsira vatambi kuwana pfuma uye masimba akasimba. Yeuka kutarisa kudya kwako uye kushanda kuti uve nemigumisiro yakanaka. The Ultimate Guide to Stanozolol (Winstrol) yeChipupuriro
Kuwanda kweiyo DHB kubvisa miyero ichagadziriswa ne ester yakaiswa pairi. Chiremba wako achave ari munzvimbo yakanakisisa yekugadzirisa dheji dzakakodzera kwauri. Zvichienderana nehutano hwemuviri wako uye zvinoda chiremba achazobva asarudza kutsigirwa kwekutsigira kunobatsira kuti uwane zvido zvinoda nyore nyore. Madzimai, nzira imwecheteyo ichashanda, asi mazamu acho achava akaderera kuti arege kukurudzirwa kwevarume maitiro.
9. Dihydroboldenone / DHB inobatsira
DHB inobatsira kune vakawanda vashandisi varo kunyanya vadzidzisi vezvemagetsi. Chirwere ichi chinoratidzika semumwe wemhando yakasimba yevanabolic steroid kunyange zvazvo isina kuiswa kune mamwe mazita anozivikanwa. Papepa, mushonga uyu unoratidzika seusina simba, asi avo vakashandisa nguva dzose vakapa migumisiro yakaisvonaka. DHB inokurudzira musimba kukura uye inovandudza simba rose remuviri. Vatambi vanotora steroid kuti vabatsire mukuvaka musimba hwakasimba uye kuwana simba yekukwikwidzana pamwe nekushanda zvakanaka. Kubva pane kugadziriswa kwevatengi pazvikwata zvakasiyana-siyana, DHB haigumburwi. Vazhinji vashandisi vanotaura kuti kubudirira kwavo mumabasa avo emitambo kune ichi chinodhaka.
Uyezve, dihydroboldenone haina kukurudzira kuchengetedza mvura mumasumbu kana kuti aromatize. Nokudaro, paunotora mushonga uyu, iwe uchava nechokwadi chekuwana miviri yehutano uye zvakare kuderedza mafuta akawanda emuviri nyore nyore. Nekudzivirira, mushonga unoshanda zvakanyatsonaka nezvimwe zvinowedzera. Mukucheka kana kubvongodza, iwe unogona kuva nechokwadi kuti steroid ichapa mhinduro dzakanakisisa.
DHB inewo zvishoma zvinokonzerwa nekuenzanisa kune dzimwe steroid inoita kuti zvive zvakanaka kune vatambi uye vashandi vezvigadzirwa zvemuviri. Vatambi vechikadzi vanogonawo kushandisa steroid asi mumadhora mashoma; inopa mimwe migumisiro yakafanana. Vatambi vechikadzi vanoshandisa ichi chirwere kuti vawedzere kushanda kwavo pamwe nekuvandudza masimba avo. Vakadzi vanorayirwa kuti vanyatsocherechedza pavanenge vachishandisa ichi chirwere. Nyanzvi dzinokurudzira kuti vakadzi vane pamuviri vanofanira kufunga kuti havasisiri kubva kune steroid iyi sezvo inogona kukanganisa mwana asati aberekwa.
Dihydroboldenone iripo zvose zviri mumuromo uye mujoyi fomu. Nokudaro, kupa zviyero zvinoshandiswa nemushandisi. Kana ukasave wakagadzikana nemakirisi nekuda kwemarwadzo unogona kusarudza mutero wemuromo. Vanhu vazhinji vanonyunyuta kuti majojo eDHB anorwadza uye marwadzo dzimwe nguva anogara kwevhiki imwe chete, mamiriro ezvinhu anoodza mwoyo vamwe vashandisi.
Zvisinei, izvi hazvifaniri kukurambidza kubva pakuzadzisa zvinangwa zvako. Ratidza chiremba wako kuti akupe iwe mushonga wemuromo kunyange iwe uchizofanira kuutora kakawanda kupfuura iyo injodzi. Kune rumwe rutivi, ruzhinji rwe dihydroboldenone migumisiro inogona kudzorwa nekuteerera mirayiridzo yechiremba. Muchidimbu, hapana chinotinetsa pamusoro pekushandisa steroid iyi, chero bedzi iwe uchibatanidza unyanzvi hwezvehutano muhutano hwose.
10. Dihydroboldenone / DHB inoongorora
Dihydroboldenone yave ichigamuchira zvakasiyana-siyana mhinduro uye DHB kuongororwa kubva kuvanhu vakasiyana. Vamwe vashandi vemuviri vakapa hukuru hwakanaka apo vamwe vanonyunyuta nezvekusawana mhinduro dzavanoda. Zvisinei, ruzhinji rwevatambi vechidiki vave vachishandisa steroid kwenguva yakareba vose vanofara uye vanotaura kuti kubudirira kwavo kune dihydroboldenone. Tichitarisa pane zvakasiyana-siyana zvigadzirwa, zvakajeka kuti vazhinji vashandi vanogutsikana nemigumisiro inopiwa nemishonga. Vamwe vashandisi vanofara kuti vakawana maitiro emhando uye vakawana simba rose remuviri. Kune rumwe rutivi, vamwe vashandisi vanonzwa sokuti mishonga ine zvimwe zvakafanana zvinonzi thermogenic kune trenbolone iyo inosanganisira kukonzerwa nekushaya hope dzimwe nguva nekuputika.
Uyezve, vatambi vakasiyana-siyana vari kuratidza mufaro wavo kubva pane chigadzirwa chacho hachikuvadzi chido, saka zvichiita kuti zvive zvakanyanya kubatsiririra maitiro ekuderedza. Iko kune avo vari kutaurira lousy chiitiko pamwe nemishonga zvakanyanya kuitira kuti marwadzo anorwa. Vamwe vashandi ve dihydroboldenone vanoti vanofanirwa kunwisa marwadzo ekujaira kwemazuva ane 7. Majojo marwadzo anowanzo uye anogona kutariswa kana iwe uchiudza chiremba wako munguva.
Sezvambotaurwa kare, miviri yevanhu inoita zvakasiyana nezvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana zvakanyanya steroid. Vamwe vanhu vanonzwa vakanaka nemakirisi apo vamwe vanonzwa vasinganzwisisiki. Iyo migumisiro yemigumisiro inokosha zvakare kunetseka kwakasimudzwa nevashandisi vakawanda. Iko kune avo vanonyunyuta pamusoro pemusoro unorema, kusuruvara, nekunyanyisa kukuru. Nyaya idzi dzose dzinogona kugadziriswa kana uchienda kuchipatara chekuongorora usati watanga kushandisa steroid uyewo magwaro anogara achiita sezvaunoenderera mberi nekufamba kwako. Kungofanana nedzimwe vana anabolic steroids, dihydroboldenone inoderedza. Nokudaro, yakakodzera post post cycle (PCT) inofanira kuitwa, uye kutsigira zvigadzirwa zvinoda kuiswa mumitambo.
11. Dihydroboldenone / DHB inotengeswa
Sezvo mutambi wenyanzvi, haugone kuisa pangozi basa rako nekutenga DHB kutengeswa kubva kune vakatendeseka uye vasina ruzivo vatengesi. Nzira chete yekuwana michina yakanakisisa ndeyo kuitora kubva kumunhu anozivikanwa uye ane ruzivo kana mutengesi. Parizvino, misika yacho yakazara nemvura zhinji nevatengi ve steroid uye mabhii asi kuti vave panzvimbo yakachengeteka; iwe unofanirwa kusiyanisa chechokwadi kubva kune fake. Mimwe michina iri pamusika inogona kunge isingafambi zvakanaka nemuviri wako. Isu tiri rakanakisisa DHB mugadziri uye mutengesi. Isu tinosunungura pasi rose, uye iwe unongoda kuite yako mazano pa webhusaiti yedu, uye isu tichatinunura munguva shoma nguva yakakwanisika. Tinonzwisisa kuti kukosha kwemari ndicho chinhu chinokosha. Nokudaro mari yedu inonzwisisika haigoni kunaka kwezvigadzirwa zvedu.
Pa BUYAAS, unogona Tenga DHB muchizhinji kana kunyange kutora zvakakwana kurongedza kwako chero nguva kubva pakunyaradza kweimba yako. Tine nzira dzokubhadhara dzakakwana kuti tiwane vose vatinokwanisa kutenga. Kutenga nesu kunokupa rugare rwepfungwa, uye iwe unogona kuva nechokwadi chekutora mitsva iwe unofarira. Isu tinogara tichikurudzira vatengi vedu kuti vaite tsvakurudzo yemusika vasati vasarudza chero mutengi weDHB. Enda kune Dhihydroboldenone / DHB mugadziri akafanana neBURASAS nguva dzose. Yeuka steroids inogona kukonzera kukanganisa mumuviri wako kana iwe ukatora hutsika hwepamusoro kana zvichida usina unhu hutsika hwakaiswa mukati. Kune mishonga yakawanda yemaitiro steroid, uye kana iwe usingadi, unogona kuwira mumisungo yavo sezvo zvigadzirwa zvinodhura kudarika zvechokwadi.
Nzvimbo yedu yepaIndaneti inoshandisa-yakanaka; saka iwe unogona kutenga nyore nyore Dihydroboldenone / DHB paIndaneti kubva paPC, laptop kana smartphone. Isu tinogadzira steroid yakasiyana yega yega ne dihydroboldenone.
Yeuka iwe unogonawo Tenga Dihydroboldenone powder kubva pawebsite yedu. Zvisinei, tinokurudzira vateereri vedu kuti vanzwisise mutemo wenyika pamusoro pechinhu chipi nechipi chavanotenga kubva pachikwata chedu. Dzimwe nyika dzakasimba uye dzinoda mvumo kana chiremba chiremba usati watumira kana kutenga mamwe steroid. Muchidimbu, isu tiri Kutenga Kutungamira Dihydroboldenone vaperesi pasi rose, uye zvese zvatinogadzira zvave zvichisimbiswa uye zvinopupurirwa nemarudzi ose emitemo yenyika. Taura nechokwadi kuti iwe unoenda kuchikoro chekurapa usati watanga kushandisa zvishandiso zvedu kuti urege kuva nemigumisiro yakaipa
12. Dihydroboldenone / DHB (1-Testosterone) yekuvaka muviri
DHB yakange iri chibereko chakakosha mumakambani ekugadzira muviri uye yakaratidza pasina mubvunzo kuti inogona kuunza mhinduro inopikira. Somuenzaniso, vanenge vari vatambi vose vakashandisa DHB vakataura zviitiko zvakanaka. Iyo mishonga inokurudzira musimba kukura pamwe nekuvandudza simba remuviri uye pakupedzisira kuwedzera kushanda. Dihydroboldenone yakarumbidzwa nekuda kwebasa rayo mumagetsi ekuchera nekucheka. Paunenge uchishandisa ichi chirwere, iwe hauna chikonzero chokufunganya nezvekuchengetedza mvura uye kunakidza sezvo isina kukonzera chero dambudziko racho. Mimwe migumisiro inowanikwawo shoma kana ichienzaniswa nedzimwe steroidhi, uye naizvozvo, iwe wakanaka kuti uende apo iwe unogadzira dare rako nhasi.
Kufambidzana nekufamba kwako nekudya kwakakodzera nekushanda kuchava pfungwa yakanakisisa yekuzadzisa zvibereko zvakanaka. Mishonga haibatsiri chido chako, zvinoreva panguva yekutengesa kunogona kuve nekudya kwakakodzera pasina dambudziko. Kuratidzira kuenzanisiro yakakodzera kune chimwe chinhu chaunofanira kuisa pfungwa pazviri, paunenge uchifamba. Murovedzeri wako uye chiremba wako ndivo vanhu vakanakisisa vanokutungamirira munguva yako yekuvaka muviri. DHB ine pfuma yakasiyana-siyana inokupa iwe musimba hwakasimba, wakasimba uye wakasimba uyo munhu wose anofarira muviri. Muchidimbu chekucheka, kuvhara steroid nezvimwe zvinowedzera zvinobatsira mukukanda mafuta asina kudiwa emafuta. Dihydroboldenone inoshanda zvakanaka nedzimwe nheyo dzinotsigira, uye hafu-hupenyu huchaenderana neseriti yakaiswa.
Hapana chikonzero chokusahadzika kukwanisa kweDHB sezvave kushamisika kune vose vashandisi vakazvivimba. Kunyange zvazvo zvigumisiro zvisingasviki, pakuguma kwekufamba-famba iwe uchafadzwa nemisungo yehutano uye uwane simba kukutora iwe nguva dzose dzekudzidzisa pamwe nekukwikwidza zvakanaka. Kana iwe uri kutora chikamu mumakwikwi asingabvumi kushandiswa kweSteroids, iwe hauna chinhu chaunonetseka nacho, sezvo zvinhu zvichinyangarika kubva mumuviri wako shure kwemavhiki e5 pakupedzwa kwemugumo. Nokudaro, ronga munguva yakanaka uye tarisa basa rako rikure kuva zvikurusa zvakakwirira.